“လွမ်းလို့ကျန်ရစ်မှာကိုတော့ အားနာပါတယ်…..´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “လွမ်းလို့ကျန်ရစ်မှာကိုတော့ အားနာပါတယ်…..´´
Posted by ခင်ခ on Mar 18, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 18 comments
ဂဇက်ရွာအပြင် ဇနပုဒ်တဲလေးနဲ့ နေလို့ တိုင်းရင်းဆေးပညာဗဟုသုတတွေကို မျှဝေပြောတတ်ခဲ့သော ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီမှာ နှီးယပ်တောင်လုပ်ကာရောင်းလို့ ငွေရှာရရှာသော ဦးခင်ခ တစ်ယောက် အိမ်ရှေ့မှာရပ်ထားတဲ့ လှည်းပေါ်ကိုပစ္စည်းတွေတင်နေလို့ လက်စသပ် ပစ္စည်းတွေကို ကြိုးနဲ့တုပ်ကာ အလုပ်ရှုပ်နေတုန်း မြို့ကိုတက် ကာ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်သူ ရွာသူလေးတစ်ယောက် ရွာကိုခဏပြန်လာစဉ် ရွာထိပ် ဦးခင်ခ အိမ်ရှေ့ အရောက်မှာတော့
“ လေးခင်ခ လှည်းပေါ်ကို ပစ္စည်းတွေတင်ပြီး ဘယ်သွားမလို့လဲ´´
“ဟ ရွာသူချောလေး မ……….. ပါလား၊ သမီး ပိုပြီးတောင် လှပြီး နည်းနည်း ၀လာတယ်နော်´´
“လှလာတာပြောလို့ လေးခင်ခ ဘာစားမလဲ၊ ဒါနဲ့ ဘယ်သွားမလို့လဲ ခရီးထွက်မလို့လား´´
“သမီးကျွေးမယ့်မုန့် နောက်ကြုံမှဘဲစားတော့မယ်ဗျာ၊ ခရီးထွက်မလို့ မဟုတ်ဘူးသမီးရေ ဒီနှစ် ကျွန်တော်ရဲ့ နှီးယက်တောင်အလုပ်က ဒီဂဇက်ရွာမှာ သိပ်မရောင်းရတော့ဘူးဗျ အားပေးမယ့်သူ နည်းလာတယ်လေ ခင်ခ မို့ ပုံမှန် အားပေးနေကျဖောက်သည်လောက်လေးဘဲ ရှိကြတာဆိုတော့ ကျွန်တော်ကလည်း အဲဒီလုပ်ငန်းဘဲ ကျွမ်းကျင် တာမို့ ဟိုဘက် ဖေ့ဘုတ်ရွာကို ပြောင်းပြီး အဲဒီမှာ လုပ်ကိုင်စားမလားလို့ စိတ်ကူးမိတာနဲ့ အဲဒီကို ပြောင်းမလို့ သမီးရေ၊ အခု ဒီဂဇက်ရွာက အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး ခေတ်မှီလာသလို ဗဟုသုတ အသိပညာ တွေလည်း ပိုပြီး အမြင်ကျယ်လာတယ်လေ ပစ္စည်းဆိုလည်း ခေတ်မှီပစ္စည်းတွေကိုမှ သုံးကြကာ သူဌေးတွေ ဖြစ်နေကြပြီဗျ ကျွန်တော်တို့လို ပြည်တွင်းဖြစ်နှီးယက်တောင်ကို မသုံးကြတော့ဘူးလေ ဒါကြောင့် သွားပြီ သမီးရေ´´
လို့ ဆိုကာ လှည်းပေါ်ကို ဦးခင်ခ တို့ ဇနီးမောင်နှံတက်လိုက်ကြပြီး သော့ပိတ်ခါထားခဲ့ရမယ့် သူတို့နေတဲ့ ရွာအပြင်က ဇနပုဒ်တဲလေးကို ခဏမျှငေးကြည့်နေတုန်းမှာဘဲ ခုန ရွာသူက
“လေးခင်ခ ကို လွမ်းနေတော့မှာဘဲနော် လမ်းခရီးဖြောင့်ဖြူးလို့ အလုပ်တွေလည်း အဆင်ပြေပါစေနော်´´
“ဆုတောင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ၊ လွမ်းလို့ကျန်ရစ်မှာကိုတော့အားနာပါတယ်….. ဒါပေမယ့် ရှေ့ရေးကိုမျှော်တွေးလို့ သွားမှဖြစ်မှာမို့ သွားပြီသမီးရေ ကျန်တဲ့သူတွေ သမီးကြုံရင်လည်း ဦးခင်ခ က အားလုံးကိုနုတ်ဆက်သွားပါတယ်လို့ ပြောပေးအုံးကွယ် တာ့ တာ သမီးရေ´´
“ဟုတ် တာ့ တာ ပါ လေးခင်ခ ရေ၊ see you နော်´´
လို့ဆိုကာ အပြန်အလှန်လက်လေးမြောက်ခါ ဝှေ့ရမ်းနုတ်ဆက်ကြရင်း ဦးခင်ခ တို့ရဲ့ လှည်းလေးလည်း ဂဇက်ရွာမှ ဝေးရာသို့ မောင်းနှင်ထွက်သွားတာကို ငေးကြည့်နေမိတဲ့ ရွာသူလေးရဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံမှာတော့ မျက်ရည်စတွေ ဖြစ်လေမလား မဖြစ်လေများ ဆိုတာကိုတော့ ဦးခင်ခ လည်းသိနိုင်မယ် မထင်တော့ပြီကွယ်။
တွေးမိတွေးကာ ရေးမိရေးရာ ပြုခဲ့တဲ့
နာမည်သုံးပါ။ အားမနာပါနဲ့ လို့ ပြောထားတယ်လေ။
ခု ပဲ ကြည့်။
လှလည်း လှ၊ ဝ လည်း ဝ ဆိုတော့ နာမည်မပြောရုံ တမည်ပဲလေ။
ဝင် ပေါ သွားတယ် ကိုခ။
လွမ်းကျန်တတ်တဲ့ ရွာသူ ဆိုရင် အနောမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။
ဆိုတော့ ရွာလည်ခေါင် မှာ လှည်းဘီးပေါက်ပါစေ နော့..
ဒီ ပို့(စ) ကို
ကိုခ အတည် ထွက်မယ်ပြောတာမဟုတ်
ယူဆလို့ ဂလို မန့်မိတာပါ။
ကျုပ်က ကိုခကြီး လိုက်ခေါ်မှာရယ်။
ဒီမှာ ချူချာလွန်းလို့ ပါဆို ဒီ ရွာ့ ဆေးဆရာကြီးမရှိရင် ဘယ်သူနဲ့ ကုရမတုန်း။
ကျုပ်မန့်တာ ဘယ်လို ဖြစ်လို့
ဒါနဲ့ လွမ်းတာကို အမျိုးအစားခွဲပြမယ်ဆိုလားး
အလွမ်း အမျိုးအစားက ဟို ဂျာပွန်က တစ်ယောက်က ပိုခွဲတတ်တယ်။
ဘယ်နဲ့ မဦးမချွတ် အလွမ်းအမျိုးအစား လာခွဲခိုင်းနေပြန်ပြီ။
နှုတ်မချက်နဲ့ … နိုချင်ဒယ် … တီချင်းဂေါင်းချင်ပြောဒါဘာ အန်ကယ်ခင်ခ :harr:
အီလတ်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေ ဘယ်လောက်ပေါပေါပါ …….. မီးပျက်နေချိန်မှာ ဒီ ယပ်တောင်လေးကပဲ အားကိုးရာပါ ။
ဒါနဲ့ .. ဒီတိုင်း ပိတ်သွားမယ့် အိမ် … အပိုဖြစ်မှာ စိုးလို့ ….. အိမ်ငှားတင်ထားမလား ဟင်င်င်….
ခညား ဂလိုလုပ်လို့ ရရိုးလားဂျ …
ဒီရွာဂျီးထဲ ကျုပ်လို ပိန်းဒဲ့လူဒွေ ချိဘာဒေးဒယ်ဂျာ …
ကျုပ်တောင် တောမထွက်သေးဘဲ ပျံလာဒါ ..
ခညားက လွမ်းလို့ ကျန်ရစ်ခဲ့မှာ အားနာဘာဒယ် … ဘာညာဒွေ လာမပေါနဲ့ ..
ရဘူးဂျ … ဒါဗျဲ ….
ဒီရွာကဇာတ်ပွဲမှာ ကမဲ့မင်းသားတွေမရှိရင် ကျနော်တို့ လို အရန်ဇာတ်ပို့ တွေ ထမင်းငတ်မှာပေါ့ဗျ
(ကုိုခင်ခ ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများအား လေးစားစွာအားပေးနေသူ)
ဦးလေးကြီး လှည်းကြုံလိုက်ချင်လို့ပါဗျို့ ခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ် အတင်းလိုက်မှာဘဲ
လူကြုံနဲ့ နှုတ်ဆက်ခိုင်းလို့ မရပါဝူး..ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြန်လာနှုတ်ဆက်ပါ… အဲ့အချိန်ကျရင် နှစ်ယောက်စလုံးကို အိမ်ထဲ သော့ပိတ်ထားတယ်…ပစ္စည်တွေအကုန်လုံးကို ဖွက်ထားမယ်..
ကဲအခု ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကျနော်ကတော့ ဧည့်သည်ဆိုတော့ သိပ်မပြောတော့ဘူး ရွာထဲမှာလူဇိုးတွေသိပ်ပေါနေတယ် လူဇိုးခေါင်းဆောင်က အမတ်မင်းတဲ့
အစကတော့ ပို့ စ်တင်ဦးမလို့ ပဲဗျာ
ကျုပ်လဲ အီးသွားပါမလို့ 
အီးဘယ်လောက်သား ပါတယ်ဆိုတာ မပြောရဲသေးဘူးရယ်
ဖေ့စ်ဘွတ် ဆိုရင် လိုက်ခဲ့ မှာပေါ့ ဗျာ
မသိဘူးတော့ မလုပ်နဲ့ 
ဖေ့ဘုတ်ရွာမှာ ဆုံကြမယ်ဆိုပေမယ့် ဂဇက်မှာ ရေးဖော်လျော့တာမို့…
KZ ရေ ရွာသူ ရွာသား အမည်တွေ အားအားယားယား မသုံးရဖူးဆိုတာ မသိဘူးလား ဟိုတလောက သူကြီးပြောသံကြားတယ်လေ။
ကိုမတ်ရေ လှည်းဘီးက သစ်သားကိုတာယာပတ်ရိုက်ထားတာမို့ အဟဲ ဘီးမပေါက်ဘူးဗျ။
နှုတ်မချက်နဲ့ … နိုချင်ဒယ် ဆိုတဲ့ အဲဒီသီချင်းဂေါင်းစဉ်ကို သိပါ၏ မအိတုံရေ။
မိတ်ဆွေ အံစာတုံးရေ တောထဲ သရဲ ကြောက်လို့ ပျံလာရင် ပြန်လာတယ်မပြောဘူး ဘာလဲ ဝေ့ပြောနေတယ်။
မင်းသားတော့မင်းသားဆိုရင် လူကြမ်းမင်းသားပေါ့ ကိုအောင်ရေ။
လှည်းမဆန့်တော့လို့ စိတ်မရှိပါနဲ့ မိဗုံ ကလေးမရေ။
ဒီရွာကလူဆို ရောင်းတော့ဘူးဗျ ကိုပေါက်ကြီးရ။ ဈေးဆစ်တတ်လွန်းလို့လေ။
အန် အဲဂလိုတော့ မလုပ်ရဘူး GaviaGirl ရေ။
ဧည့်သည်ကြီး ကိုဖိုးထောင်ရေ ကျန်းမာပါရဲ့နော်။
ကိုပေရေ ၀မ်းချုပ်တာများရင် လိပ်ခေါင်းဖြစ်တတ်တယ်နော်။
ဟုတ် လောလောဆယ် နွေရာသီတော့ ဖေ့ဘုတ်ရွာမှာ လုပ်ကိုင်စားမှာမို့ ရှိပါရဲ့ ရာမညရေ။ လာလည်နော်။
ကိုကျောက်ကိုတော့ လွမ်းမှာစိုးလို့ နုတ်မဆက်တော့ဘူးနော်၊ တာ တာ့ ပါဗျ။